China ịwụ Igwe Mbuli rụpụta na Factory | Obodo Chinatown
Anyị bụ ndị a ọka ọka erute ígwè na-eweta. Anyị adịchaghị TDTG usoro ịwụ mbuli bụ otu n'ime ndị kasị echekwa ngwọta maka granular ma ọ bụ pulverulent ngwaahịa njikwa. A na-edozi bọket na eriri kwụ ọtọ iji nyefee ihe. A na-etinye ihe ndị ahụ n'ime igwe site na ala ma gbanye ya site n'elu.
Usoro usoro a na - abịa na oke ikike nke 1600m3 / h. A na-eji ya na usoro nkwakọba ihe maka ọka wit, osikapa, mkpụrụ osisi mmanụ, na ụfọdụ ọka ndị ọzọ. Na mgbakwunye, enwere ike iji ya dị ka igwe na-edozi mkpụrụ maka ụlọ ọrụ ntụ ọka, ụlọ ọrụ osikapa, ebe a na-azụ nri fodder, were gabazie.
1. Nke a ọka mbuli nwere ike rụọ ọrụ nke ọma zere ìgwè ngwaahịa, iwelata breakage n'ihe ize ndụ na-amalite were were na ịwụ jupụtara na buut 1/3 jupụtara ọka. Igwe Igwe Bọket nwere ike ịrụ ọrụ mgbe niile n'okpuru ọnọdụ zuru oke.
2. Isi na buut ngalaba nke igwe bụ kpam kpam dismountable na-ruo eruo na replaceable eyi na-eguzogide echekwa echekwa efere.
3. Ọnụ ụzọ nyocha dị n'akụkụ abụọ nke isi na ngalaba buut.
4. belt ahụ dịkarịa ala okpukpu atọ nke roba na naịlọn kamakwa dabere na ike na elu nke igwe mbuli.
5. The casings nke ịwụ mbuli na-ndokwasa site Flange njikọ na roba gaskets, na nwere magburu onwe akụkụ ziri ezi na nkenke.
6. All pulleys na-statically na dynamically ziri ezi, na ha na-kpuchie na roba maka a elu iguzogide enweghị slide.
7. The pole biarin bụ nke abụọ n'usoro * Tụkwasị na onwe-kwado ụdị. Ha na-ejide uzuzu ma kwụgoro n'èzí casing.
8. Usoro a na-eburu ihe dị n'akụkụ buut nke elevator ịwụ.
9. Anyị na-eji igbe dị elu na gear igwe. The bevelled ụdị gia igbe na-abịa na hardening ezé na na n'ụzọ zuru ezu nchọ, mgbe mmanụ ikwommiri lubrication Usoro na nakweere. Igbe igbe German SEW dị maka izute ihe ndị chọrọ ndị ahịa.
10. Complete set of nchekwa unit e mere maka anyị ịwụ mbuli. A na-ejikwa eriri ọsọ ọsọ nke ọdụ ọdụ ọ bụla na ngwa ngwa azụ iji gbochie eriri ahụ ịda azụ na ihe omume nke ike.
11. Bọket ígwè ma ọ bụ bọket polymeric dị.
.Dị Nnyefe Ratio Ọsọ (m / s) Ike (t / h)
Ntụ ọka Wheat Ntụ ọka (r = 0.43) Ọka (r = 0.75)
NKD26 / 13 9-23 0.8-1.2 1.2-2.2 1.2-2 6.5-9.5
NKJ 36/13 9-23 1.2-1.6 1.6-3 2-3 8-12
NKJ 36/18 9-23 1.2-1.6 1.6-3 4.5-6 16-27
NJ. 18/18 9-23 1.3-1.8 1.8-3.3 5-7 22-34
NJD / 24 11-29 1.3-1.8 1.7-3.4 8-12 30-50
NKJ / 28 11-29 1.3-1.8 1.7-3.4 9-13 40-65
NKD60 / 33 13-29 1.5-2 1.8-3.5 25-35 45-70
NKJ 60/46 13-29 1.5-2 1.8-3.5 32-45 120-200